Alshahid oo Muqdisho ka furtay Aqoon is waydaarsi ka hadlaya maamulka Mashaariicda horumarinta (Sawirro) | Shabakada Alshahid
Alshahid oo Muqdisho ka furtay Aqoon is waydaarsi ka hadlaya maamulka Mashaariicda horumarinta (Sawirro)
Added by Webmaster on December 26, 2012.
Saved under Horumar, Muuji, Sawirada, Warar, Warbixin
Mogadishu (Alshahid)- Waxaa maanta Xafiiska Xarunta Cilmi-baarista iyo Daraasaadka Warbaahinta ee Alshahid ay ku leedahay Muqdisho ka furmay Aqoon is waydaarsi lagu baranayo Maamulka Mashaariicda Horumarineed, kaas oo ay ka qayb galayaan Aqoonyahanno, xubno ka socda hay’adaha rayidka ah iyo Ardayda Jaamacadaha.
Aqoon is waydaarsiga ayaa wuxuu soconayaa Laba Maalmood, waxaana furitaankii maanta kasoo qayb galay Marti Sharaf isugu jiray Khubaro ku xeel dhaar qodobada Barnaamijku uu ka hadlayay ee Maamulka Mashaariicda Horumarinta iyo Xubno kale oo Ururada Bulshada rayidka ka socday.
Markii sida dadka Muslimiinta ah Caadada u ahba lagu furtay Aayadaha Qur’aanka Kariimka oo mid ka mida ka qayb galayaashu uu aqriyay, ayaa waxaa hadalkii furitaanka ka jeediyay Munaasabadda Maamulaha Xarunta Alshahid ee Somalia Mudane Cabdiraxmaan Maxamed Tuur-yare.
Mudane Tuuryare ayaa si dheer uga hadlay Xarunta Alshahid iyo aas-aaskeeda iyo waliba howlaha ay qabato. Wuxuuna ku nuux nuuxsaday in qabashada Aqoon is waydaarsiga ceykan ah ay Xaruntu mudo dheerba kasoo shaqaynaysay kuna dadaaleyso sii wadistiisa.
Agaasimaha Xafiiska Alshahid ee Somalia Mudane Cabdiraxmaan Tuuryare ayaa hadalkiisa raaciyay in Barnaamijka maanta uu Siminaarku ka hadlayo uu yahay mid aad muhiim u ah marka la eego dalka oo waqtigan horumarin qaybo badan leh wajahaya, sidaas darteedna wuxuu ku guubaabiyay ka qayb galayaasha Siminaarka inay xoogga saaraan Casharada ay qaadanayaan.
Intaa ka dib waxaa hadalo kooban goobta ka jeediyay Marti Sharaf kala duwan oo uu ku jiray Ustaad Cusmaan Xassan Saalax oo Cilmiga Xiriirka Caalamiga ah kusoo bartay dalka Pakistan, heystana Shahaadada Master-ka, sidoo kale waxaa isna hadal jeeediyay Cabdullahi Aadam Muuse oo Cilmiga Taariikhda ku taqasusay iyo Ustaad Saalax Sheikh Ibraahim Dhiblaawe oo ah Agaasimaha Xarunta AAFAAQ ee Adeegyada Warbaahinta.
Dhamaan Marti sharaftan waxay Alshahid ku amaaneen dadaalka ay u bixinayso qabashada Aqoon is waydaarsiyada ka hadlaya arrimaha muhiimka u ah bulshada Soomaaliyeed, iyagoo ku booriyay ka qayb galayaasha Siminaarkana inay si wayn Duruusta xoogga u saaraan.
Markii hadalada furitaanka ah iyo Marti sharaftu ay dhamaadeen ayaa waxaa la guda galay Duruustii lasoo jeedinayay. Waxaaa maanta Darsi aad u dheer oo Saacado badan qaatay soo bandhigay Ustaad Suldaan xaaji aadan oo Maamulka Kheyraadka Bani’aadamka ka heysta Shahaadada Master-ka isagoo kusoo bartay dalka Pakistan.
Ustaad Sultaan ayaa ka hadlay macluumaad guud oo ku saabsan Maamulka Mashaariicda Horumarinta iyo qodobada aas-aasiga u ah. Sidoo kalena wuxuu sharaxaad dheer ka bixiyay waxa la yiraa Maamul, Mashruuc iyo waliba faham guud oo Mashaariicda Horumarinta ku saabsan.
Iskusoo wada duube Siminaarkii maanta ayaa jawi farxad leh kusoo dhamaaday. Waxaana intii ay howshu socotay jiray fursado la siinayay ka qayb galayaasha oo ay Qodobada Duruusta la bixinayay ku jira ee muhiimka ah kaga doodayeen kuna falan-qeynayeen.
Waxaa loo balamay maalinta Berrito ah oo Duruus kale oo Siminaarka qayb ka ah ay Aqoonyahanno kale soo bandhigi doonaan haduu Eebe Idmo.
Xarunta Alshahid waxay Sanad kasta qabataa tiro Aqoon is waydaarsiyo iyo kulamo lagusoo dhawaynayo dadka muhiimka u ah Bulshada si ay isula meel dhigaan hadba arrimaha lagama maarmaan loo arko ee markaas Bulshadu ay danaynayso.
Marka Barnaamijyadaas lasoo gaba gabeeyana waxay Alshahid samaysaa Warbixinno iyo Buugaag baaxad leh oo lagusoo uruuriyo Xogtii laga uruuriyay ka qayb galayaasha Siminaarada, si taas ay fursad u siiso dadka aan Barnaamijyadaas ka qayb galin una baahan inay wax badan oo macluumaad ah ka helaan arrimaha laga hadlo.